Magaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby oo yeelaneeysa xarrun boolis | Somaliska
Xaafadda Rinkeby ee magaaladda Stockholm ee dalkaan Iswiidhan ayaa lugu wadaa in ay yeelato xarrun boolis. Taliyaha ciidanka booliska Dan Eliasson, oo dhagax dhigay goobta laga furi doono xafiiska cusub ee boliisku ku yeelanayo xaafada Rinkeby.
Xarrunta booliska ee xaafaddaasi yeelan doonta ayaa ka howl gali doonaa ciidan gaaraya 240 askari oo howlo kala duwan qaban doona. Xaafadda Rinkeby oo mudooyinkii ugu dambeeyey ammaankeeda faraha ka baxay, ayaa hadda dadka deegaanka ay aad u soo dhaweeyeen, iyagoona raja ka qaba in ammni xummadda soo laa laabtay wax ka qaban doonto. Xaafadan ayaa horey waxaa lugu xiray kaamirooyin ilaala ka qabata.
Dan Eliasson-na waxaa uu sheegay in talaabadani wax badan ku soo kordhin doonto dadka deegaan oo xarruntaasi adeegyo kala duwan u qaban doonto sida dalbashada dhalashadda dalka. Isagoo u waramayey warfidiyeenadda halkaa joogay ayuu xaqiijiyey dadka deegaanka qaarkood ay shaqaaleeysiin doonaan si ay gacan u siiyaan.
Xafiiskan ayaa la furi doonaa dabayaaqada sanadka 2019-ka, hase ahaatee ay ciidanka booliska ka warqabka xaafadaasi xarrummo kala duwan ka hagi doonaan. Waxaa ku kacaya adduun gaaraya 747 malyan oo lacagta karoonka iswiidhish-ka ah. Waana markii ugu horeeysay oo xaafaddu yeelan doonto xarrun booliska, waxaana ay tani imaaneeysa xilli ammaanka xaafaadaasi noqotay mid faraha ka baxay.